“မလေးရှား ၊ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Myanmar Muslims live in constant fear
Apa mahu lagi Myanmar Muslims dan Rohingyas? (= What do you want more Myanmar Muslims and Rohingyas?) »
“မလေးရှား ၊ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ”
ဒီအကြောင်းမျိုး Status တစ်ခု တင်ပြီး မရေးချင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ပြောနေကြတာတွေက လွန်သထက်လွန် လာနေကြတော့ အဖြစ်အပျက် အကျိုးအကြောင်း နည်းနည်းလေး ရေးချင်လာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူရ် မြို့မှာ ရှိတဲ့ Putra World Trade Centre မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Inter-faith dialogue အစီအစဉ် တစ်ခုမှာ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ သက်တမ်းအကြာဆုံး ဝန်ကြီးချုပ် အဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ မဟာသီရ် မိုဟမ္မဒ် က အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ (Malaya Strait) မလာယာ ကျွန်းဆွယ်ကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အိန္ဒိယ နှင့် အာရပ် ကုန်သည်တွေ ရောက်လာပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေ လုပ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ ရုပ်တု ဆင်းတုတွေ ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ “ဟိန္ဒူအယူဝါဒ” လွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့ ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရောက်လာတဲ့ အိန္ဒိယ နှင့် အာရပ်ကုန်သည်တွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု သဘာဝအရ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့ ဘာသာစကားတောင် အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ အတိုးအညွန့်မစားမှု၊ ညအခါမှာ နိုးကြားပြီး ဝတ်ပြုကြမှု၊ အပေးအယူမှန်ကန်မှု၊ ကျမ်းစာပါ သင်ကြားမှုများကို ရှင်းပြသင်ကြားပေးမှုတွေကြောင့် လူအများအပြား အစ္စလာမ်ရဲ့ အလင်းရောင်အောက် ခိုဝင်ခဲ့ကြတာပါ။
ဘယ်မွတ်စလင်မ် စစ်တပ်မှ ဒီနယ်မြေကို မရောက်ခဲ့တာ သမိုင်းသက်သေပါ။”
အဲတော့ဗျာ ဒီနယ်မြေတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားခဲ့ကြောင်း ပြောရင်လည်း ဟိန္ဒူများကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောကြည့်ရင် ပိုမှန်မယ်ထင်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက ဟိန္ဒူတွေက ဖန်ဆင်းရှင်ရှိကြောင်းတော့ လက်ခံတာလေး သိထားဖို့လိုမယ်နော်။
This entry was posted on May 11, 2013 at 11:38 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.